फोटोमा छोएर देखेको ३ सेकेन्ड मा सेयर गरि आफ्नो रासिफल पढनुहोस
मेष राशि गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा राम्रो समय रहेको छ । खानपानको कारणले स्वास्थ सम्बन्धि समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । अनावश्क कार्यका निम्ति बढि समय ब्यतित हुन सक्छ । बृष राशि मान्य जनको साथ सहयोग द्वारा कार्यको.....
आज भाद्र २० गते शनिबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल भाद्र २० गते शनिबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर ५ तारीख आश्विन कृष्णपक्ष तृतीया तिथी १४ः२३ बजे सम्म पश्चात चतुर्थी तिथी रेवती नक्षत्र गण्ड योग भद्रा करण चन्द्रंमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु गातिला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष.....
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नजिकका आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादविवादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । बृष.....
मनकामनामाइको दर्शन गर्दै , हेर्नुहोस आजको राशीफल
मेषः– अस्थिरता बढ्नेछ । समयमा काम गर्न नसक्दा उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ । अनावस्यक वाहिरी काममा धेरै समय खर्च हुनेछ । विश्वास र भरोसामा काम गर्दा डुबिनेछ । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । परबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । मिथ्या कुराले सताउनेछ । जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । वृषः– दिनको.....
मेष राशि – अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । बृष.....
सुपा देउराली झण्डै ४,५०० फिटको उचाइमा अवस्थित अर्घाखाँची जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित देवीस्थल हो। त्यस मार्गमा आवतजावत गर्ने । धर्मात्माहरूको इच्छा पूरा गराइदिने सुपादेवी स्थानीय क्षेत्रमा आस्थाकी प्रतीक मानिन्छिन् । सन्धिखर्क गोरुसिङ्गे राजमार्गस्थित सुपाखोलाको पश्चिम पाउमा अवस्थित छ । यो.....
मेष राशिफल- तपाईंको मुस्कान निराशा विरुद्धको समस्या रोक्ने झैं काम गर्नेछ । सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन । तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ । आफ्नो प्रयास सही दिशामा गर्नुहोस् र तपाईंलाई असाधारण लाभ.....
मेषः– पूर्ण शान्तिको बातावरण अझै बन्ने छैन । फाइदा हुने काम कम हुनेछन् । काम गर्दा अरुको भनाई खानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ सजग रहनुहोला । अरुलाई सहयोग बढि हुनेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी भने नबढाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट थोरै आम्दानी हुनेछ । वृषः– आज पनि सयमले साथ दिने.....
आजको पञ्चाङ्ग वि.सं. २०७६ माघ १५, बुधबार, इ.स. २०२० जनवरी २९, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, ने.सं. ११४० सिल्लाथ्व, माघ शुक्लपक्ष, चतुर्थी, ८:४२ उप्रान्त पञ्चमी, नक्षत्र– पूर्वभाद्रपदा, १०:४२ बजेउप्रान्त उत्तरभाद्रपदा, योग– शिव, २७:०७ बजेउप्रान्त सिद्ध, करण– भद्रा, ८:४२ बजेदेखि वव, २१:४७ बजेउप्रान्त.....